Saafi Films - News: Masuulkii ugu Safarka yaraa Dowladihii KMG ee Soomaaliya iyo inta Safar uu dalkla dibadiisa uga baxay (Talow Waa Kuma)
Masuulkii ugu Safarka yaraa Dowladihii KMG ee Soomaaliya iyo inta Safar uu dalkla dibadiisa uga baxay (Talow Waa Kuma)
Maxamed Cabdulaahi Maxamaed Farmaajo Raizul Wasaarihii Xukuumadii TAYO ayaa noqday masuulkii ugu safarka yaraa intii uu hayay Xilka Raizul Wasaarnimo ee Soomaaliya.
Farmaajo ayaa xilkaasi hayay mudo ku eg Lix bilood ,balse mudadaasi yar muujiyay wax qabad ay rag badan la imaan waayeen sanado badan ,hasa ahaatee Farmaajo ilaah ku guuleeyo Howl karnimo geesinimo iyo wax qabad run ah.
Raizul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay Markii uu dalka imaanayay oo Xukuumada Raizul Wasaare ka noqonayay lagu wareejiyay Qasnad faaruq ah hasa ahatee markii uu dalka ka tagay oo Xukuumada wareejiyay uu Sanduuqa Xukuumada uga tagay lacag dhan 7-Milyan oo Dollar.
Waxaa kale uu Farmaajo sheegay intii uu Xilka hayay uu dalka joogay kuna hoolanaa sidii uu umada wax ugu qaban lahaa intii yareed uu joogay oo dhoor safar oo laga maarmaan ah u baxay oo danta dalka iyo dakaba aheed.
�� Mudadii aan Ra �iisal wasaaraha ahaa Waxaan safar aaday Sadex jeer anigoo eegaya danta Shacbka iyo tan ciidamada Waxaana kharashka la ii siiyo safarkaasi aan inta harta ku soo celin jiray khasnada Dawlada,waayo hadii aad mar walbo safrta waxaa kugu baxaya Qarash Badan Diyaarada iyo sidoo kale Hotelo qaali ah �� ayuu Yiri Framaajo.
Si kastaba Farmaajo ayaa lagu tiriya Hogaamiyihii ugu fiicnaa ee Mudooyinkan xil ka qabta Soomaaliya iyadoona hada Shacabka Soomaaliyeed ay aad u taageersanyihiin Farmaajo in mar kale lasoo doorto oo Madaxweyne laga dhigo.
4,488,961 unique visits